Ensure ထဲတွင် မည်သည့်ပါဝင်ပစ္စည်းများ ပါဝင်သလဲ?
Ensure ထဲတွင် ပြည့်ဝ မျှတသည့် အာဟာရအတွက် လိုအပ်သော ပါဝင်ပစ္စည်းများ ပါဝင်ပါသည်။ ထို အာဟာရဓာတ်များသည် လူသားတို့အတွက် လုံခြုံစိတ်ချရပြီး အခြားအစားအစာများတွင်လည်း ပါဝင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ၎င်းတွင် ကြွက်သားကျန်းမာရေးကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သော ကယ်လ်ဆီယမ် HMB နှင့် အရည်အသွေးမြင့် ပရိုတင်း ၃ မျိုး ပါဝင်ပါသည်။ ခန္ဓာကိုယ်အား အထောက်အကူပြုနိုင်သော အဆီများဖြစ်သည့် အိုမီဂါ3နှင့် အိုမီဂါ6တို့လည်း ပါဝင်ပါသည်။ ပါဝင်ပစ္စည်းအချက်အလက် အပြည့်အစုံကို ဘူးပေါ်တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
Ensure ထုတ်ကုန်များအား ဆီးချိုသွေးချို မရှိသူများအတွက် ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ Abbott Nutrition ၏ အခြားထုတ်ကုန်ဖြစ်သော Glucerna သည် ဆီးချိုသွေးချိုရှိသူများအတွက် အထူးထုတ်လုပ်ထားပြီး သွေးတွင်းသကြားဓာတ် လျှော့ချပေးနိုင်သည့် ချေဖျက်ထားသော ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်များ ပေါင်းစပ်ပါဝင်ပါသည်။
သို့သော် Ensure ထုတ်ကုန်များသည် ဆီးချိုသွေးချိုရှိသူများ၏ အစားအစာနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
Ensure မှ ပေးစွမ်းသော ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ် ရရှိရန်အရေးကြီးပါသည်။ လိုအပ်သည့် ထိန်းညှိမှုများကို ပြုလုပ်နိုင်ရန် သောက်သုံးပြီး ၂ နာရီအကြာတွင် သွေးတွင်းသကြားဓာတ် ပမာဏသက်ရောက်မှုကို သိနိုင်ဖို့ တိုင်းတာပါ။ ဆီးချိုသွေးချိုရှိသူများသည် အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် အာဟာရထုတ်ကုန်၊ ဖြည့်စွက်စာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုပေးသူများနှင့် တိုင်ပင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ အကြံပြုပါသည်။
Ensure သောက်သုံးခြင်းဖြင့် ကိုယ်အလေးချိန် တိုးလာနိုင်ပါသလား?
Ensure သည် အာဟာရချို့တဲ့သူများ၊ နာမကျန်းဖြစ်၍ ကိုယ်အလေးချိန် ကျဆင်းသူများ၊ ကျန်းမာသော ကိုယ်အလေးချိန် ထိန်းသိမ်းလိုသူများအတွက် ပြည့်စုံမျှတသော အာဟာရ ရရှိစေရန် အထူးထုတ်လုပ်ထားသော ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါသည်။
Ensure သောက်သုံးခြင်းဖြင့် ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချနိုင်ပါသလား?
Ensure သည် အစာစားချင်စိတ် မြှင့်တင်ပေးရန် ထမင်းအစားထိုး (သို့မဟုတ်) အရသာရှိသည့် သရေစာအဖြစ် အစာစားချိန် စပ်ကြားတွင် စားသုံးနိုင်ပါသည်။ Modified Diet လုပ်နေသူများ၊ အာဟာရဓာတ် ချို့တဲ့သူများ၊ ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျသူများ၊ နာမကျန်းမှု (သို့) ခွဲစိတ်မှုတို့မှ သက်သာလာသူများအတွက် သင့်တော်သည်။ Ensure သည် ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချမှုအတွက် သီးသန့်ထုတ်လုပ်ထားခြင်းမဟုတ်သော်လည်း၊ တစ်နေ့တာအတွက် လိုအပ်သော ကယ်လိုရီပမာဏကို အကြံပြုပေးပြီး ကယ်လိုရီလျှော့ချ အစားအစာအနေနှင့် သုံးဆောင်နိုင်ပါသည်။ လိုအပ်သော ကိုယ်အလေးချိန် ရရှိမှုအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပညာရှင်များနှင့် တိုင်ပင်ရန်လည်း အထူးအကြံပြုပါသည်။
Ensure ကို သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် သီးသန့် ထုတ်လုပ်ထားပါသလား?
Ensure သည် အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် ပြည့်စုံမျှတသော အာဟာရ ရရှိစေရန် သိပ္ပံနည်းကျ ထုတ်လုပ်ထားသော အသင့်သောက်သုံးနိုင်သော ဖြည့်စွက်အာဟာရ ဖြစ်ပါသည်။ အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ ကြွက်သားဆုံးရှုံးမှုကို ကာကွယ်ပေးရန်နှင့် ကြွက်သားကျန်းမာရေး၊ ခွန်အားနှင့် ခံနိုင်ရည် ရှိစေရေးတို့အတွက် စီမံထုတ်လုပ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Ensure ကို ဘယ်မှာ ဝယ်လို့ ရပါသလဲ?
နာမည်ကြီး ဆေးဆိုင်များနှင့် စူပါမားကတ်ကြီးများတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်- Abbott Care Line +959 260356262 ကို နံနက် ၈း၃၀ မှ ညနေ ၅း၃၀ အတွင်း ရုံးပိတ်ရက်များမှအပ စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Ensure ရဲ့ ဈေးနှုန်းက ဘယ်လောက်ပါလဲ?
ရောင်းချသူအပေါ် မူတည်၍ ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်ပါသည်။